BunnyStudio: Raadi Xirfad-yaqaan Codka-Dheeraad Leh oo si dhakhso leh oo fudud ugu fuliya mashruucaaga maqalka | Martech Zone
Ma hubo sababta qofkasta uu u furayo makarafoonkiisa laptop-ka oo uu u qabanayo shaqo xun isagoo ka sheekeynaya fiidiyoow xirfad leh ama raad maqal ah ganacsigooda. Ku darida cod xirfad leh iyo dhawaajiste waa qaali, waa fududahay oo hibada meesha taalaa waa mid cajiib ah.
In kasta oo laga yaabo inaad damacsan tahay inaad raadsato qandaraasle lambar kasta oo tusayaal ah, BunnyStudio waxaa si toos ah loogu bartilmaameedsanayaa shirkadaha u baahan caawimaad maqal oo xirfadlayaal ah oo ku saabsan xayeysiintooda maqalka, daadihinta, isjiidka filimka, fiidiyaha, adeegayaasha taleefanka, ama mashaariicda kale ee maqalka ah. Waxay bixiyaan kumanaan jilaayaal cod madaxbanaan ah oo luqado kala duwan leh oo horay loo sii-hubiyey.
Boggu wuxuu ku siinayaa fursad aad ku shaandhayso oo ku weydiiso kartida ay u leeyihiin cod -ka -gudbinta, qorista, fiidiyaha, naqshadeynta, ama xitaa qoraalka. Waxaad dooran kartaa inaad ballansato kartida aad heshid, aqbasho qof si dhaqso leh u rogi kara mashruuca, ama xitaa ku tartami kara xoogaa karti-cod-si aad adigu u dooran karto qofka guuleysta! Kaliya dooro adeegga, luqadda, iyo tirada ereyada ku jira qoraalkaaga oo waxaad diyaar u tahay inaad tagto:
Ku darso codka shaybaarka - Raadi keydka macluumaadka jilayaasha codka, hubi shaybaarkooda, oo dooro midka ugu habboon mashruucaaga.
Soo gudbi mashruucaaga oo kooban - U dir macluumaadkaaga mashruuca. Faahfaahin dheeraad ah oo aad bixin karto, waxay sifiican u fahmi karaan baahiyahaaga.
Hesho codkaaga diyaarka u ah in la isticmaalo - Ansixi oo soo dejiso codkaaga u diyaarsan-in la isticmaalo, ee tayada lagu xakameeyo ama aad codsato dib-u-eegis.
Waxaan hore u adeegsan jiray masraxa waxoogaa shaqo ah (oo hore loogu yiqiinay VoiceBunny) oo aan maanta ku soo noqday si aan cod cusub ugu helo cod-baahiyahayaga, Martech Zone Wareysiyo. Saacad gudaheed waxaan yeeshay cod-dhammaystiran oo aan hadda ku adeegsanayo qaybtayda xigta.
Waa kan hordhaca podcast -ka:
Waa kan muuqaalka podcast -ka:
Xusuus-qor… xawaaraha soo-celintaas waxay u badan tahay maxaa yeelay wuxuu ahaa mashruuc yar oo ka yar 100 eray… Waxaan aaminsanahay in dookha xawaareyntoodu ay ka yar tahay 12 saacadood inta badan mashaariicda.
Madalku wuxuu kaloo kuu oggolaanayaa inaad dhisto miiskaaga shaqo ee karti cod-ka badan oo aad hore u adeegsan jirtay oo aad jeclaan lahayd inaad mar labaad isticmaasho…
Madal sidoo kale waxay bixisaa ah API shirkadaha raba inay ku daraan cod-dhaafka iyo maqalka mashaariicda soo-saarka kadib wax soo saarkooda ama adeeggooda. Iyo, ururada waawayn, waxaad kalaxiriiri kartaa BunnyStudio mashaariic mugleh ama adeegyo ubaahan qaabab gaar ah, ama alaabooyin adag
Dalbo Codkaaga Hada!
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay BunnyStudio.
Tags: audiotafatirka maqalkawax soo saarka kadibqoraalka qoraalkabunnystudiodubbixincodka trailer filimkafilimka codka filimkacodka luqado badanadeegaha nidaamka taleefankaIntro Podcastdibedda Podcastpodcastingwax soo saar kadibqoraalkatarjumaadajilayaasha codkacod korcodbunnycod dheer